XOG: Madaxweynaha Puntland oo kusii jeeda gobalka Mudug, Waase maxay Ujeedada Socdaalkiisa? – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa warar ay heshay Puntlandtimes.com sheegayaan in uu ku sii jeedo gobalka Mudug, tan iyo markii uu xilkaas qabtay horaantii sannadkan waa booqashadii Koowad ee uu ku tagayo.
Safarka Madaxweyne Deni ee gobalka Mudug, waxaa hareyn doona qadiyaddaha ku saabsan Kiiskii Caasho Ilyaas Aden oo ahayd gabar 12 sanno jir ahayd oo lagu dilay Gaalkacyo si fool xun, dhismaha dekeda Garacad iyo Mashaariic horumarineed oo uu ka dhagax-dhigi doono gobalka Mudug.
Wasiiro katirsan Xukuumadda oo ka soo jeeda gobalka Mudug ayaa ka hor safarka Madaxweynaha tagaya Gaalkacyo, iyagoo la kulmi doona odayaasha dhaqanka iyo bulshada, diyaarinaya soo dhaweynta wafdiga Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Sidii caadada u ahayd reer mudug carmey reer mudug lasoo shirtagaan sidaan oo kale…
” tolbeelay ma ina afdoqosh iyo ina afqurun iyo ina afsabeen miyaad madaxweene rabtaa in aad horteen ku toogatid… tolbeelay oo tol beelay””.
Waxaan madaweyne Deeni kula talin in uusan faragalina oo cidana ugu aaba yeelin xukunka xaqa ah ee maxakamadu soo saartay.
Reer bari iyo reer mudug is booqday waa cajiib. Tolow see isu fahmi-doonaan. Markii deeni yiraahdo
“” boowe iyo baayo ma barideen””
Reer mudug waxay ugu jawaabin
“” balo iyo baas ma jireene bog iyo baruur ma wadaa””
Deeni’na intii uu riyaaqo ayuu oran
“” boowe iyo baayo baabuur iyo basaas-badan baan inii wadaa””
Bal yaa u kala turjumin qaruuntaan